HTC သတင်းများ - ပစ်လွှတ်မှုများ၊ လက်ကိုင်ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များ၊ အမြစ်နှင့်အခြားအရာများ - Androidsis | Androidsis (စာမျက်နှာ ၂)
HTC သည်၎င်း၏ပထမဆုံး 5G ဖုန်းကို ၂၀၂၀ တွင်ဖြန့်ချိမည်
ကုမ္ပဏီ၏အတည်ပြုချက်အရ ၂၀၂၀ တွင်တရားဝင်ဖြစ်မည့် 5G ဖြင့်ပထမဆုံး HTC ဖုန်းကိုစတင်မိတ်ဆက်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
HTC Wildfire X - အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်ဖြန့်ချိမည့်တရားဝင်တရား ၀ င်တင်ပို့လိုက်သောအမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်ဖြစ်သော HTC Wildfire X အကြောင်းအားလုံးရှာဖွေပါ။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် HTC သည်ခဏတာကြာလိမ့်မည်ဟုထင်ရသည်။ အစီရင်ခံစာအသစ်အရ၎င်းသည်မကြာမီအိန္ဒိယဈေးကွက်တွင်ထပ်မံလည်ပတ်တော့မည်ဖြစ်သည်။
HTC Wildfire X သည်မကြာမီတွင်ဘတ်ဂျက်အပိုင်းသို့ရောက်ရှိတော့မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတပ်ဆင်မည့် SoC သည် Mediatek မှ Helio P22 ဖြစ်သည်။
HTC တောမီးနှင့် Wildfire E1 - အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ပေါက်ကြားသွားသောရုပ်ပုံပုံများ
မကြာမီ HTC သည်ကိရိယာသစ်လေးမျိုးကိုစတင်မည်။ ၎င်းတို့အနက်မှ ၂ ခုမှာတောမီးနှင့် Wildfire E1 ဖြစ်ပြီးသူတို့၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
စုစုပေါင်းမော်ဒယ်လေးမျိုးနှင့်မကြာမီဖြန့်ချိမည့် Wildifire range ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းရန် HTC ၏အစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များနှင့် HTC Wildfire E နှင့် Wildfire E Plus တို့၏ပုံများပေါက်ကြားနေပြီ
HTC Wildfire E နှင့် E Plus ၏ပထမဆုံးပြန်ဆိုထားသောပုံရိပ်များသည် ၄ ​​င်းတို့၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်နည်းပညာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူပေါ်လာသည်။
HTC U11 + သည် Android Pie သို့အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုလက်ခံရရှိနေသည်
နောက်ဆုံးတွင် Android Pie ကို HTC U11 +၊ အလယ်အလတ်အဆင့်ရှိစမတ်ဖုန်းအတွက် 2017 ခုနှစ်တွင်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
HTC Wildfire E - စမတ်ဖုန်းအဟောင်း၏အဆက်ကိုဆက်လက်အသုံးပြုခြင်း
မကြာခင်မှာပဲ HTC Wildfire E ကို HTC မှလက်ခံရရှိလာသည်။ ၎င်းသည်ထိုင်ဝမ်ဖုန်းအဟောင်းများပြန်လည်ရှင်သန်လာလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးတွင် HTC U12 + သည် Android Pie ကိုရရှိသည်
လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာကကတိထားခဲ့သကဲ့သို့ HTC U12 + သည် Android Pie သို့အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုလက်ခံရရှိနေသည်။
တရားဝင်မိတ်ဆက်ထားပြီးဖြစ်သော HTC U19e နှင့် HTC Desire 19+ မှအလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းအသစ်များအားလုံးကိုရှာဖွေပါ။
ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီကပိုစတာမှတစ်ဆင့်ကြေငြာခဲ့သောဖြစ်ရပ်တစ်ခုတွင် HTC စမတ်ဖုန်းအသစ်ကိုဇွန်လ ၁၁ ရက်တွင်စတင်မည်။
Android Pie update နှင့် HTC U11 ကြုံတွေ့ခဲ့သည့်ပြtheနာများကိုပိုမိုရှာဖွေ။ ယာယီအငြိမ်းစားယူသည်။
!! ဂုဏ်ယူပါတယ် !! HTC U11 သည် Android Pie သို့အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုလက်ခံရရှိနေသည်။ ဒီတစ်ခုမှာအဓိကပြောင်းလဲမှုများနှင့်တိုးတက်မှုများပါရှိသည်။
တရုတ်နိုင်ငံရှိအကြီးမားဆုံးစတိုးဆိုင်အချို့တွင်၎င်း၏ဖုန်းများကိုရောင်းချခြင်းကိုရပ်တန့်ရန် HTC ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက၊
ကုမ္ပဏီမှတရားဝင်ကြေငြာထားပြီးဖြစ်သောယခုနှစ်တွင် HTC စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သောပထမဆုံးဖုန်းအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
HTC U11, U11 + နှင့် U12 + တို့ကို Android9Piece သို့မည်သည့်အချိန်တွင်မွမ်းမံသွားမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သည်
HTC U11, U11 + နှင့် U12 + တို့သည်မကြာမီ Android Pie ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်ဟုထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီကအတည်ပြုခဲ့သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြောပြပါမည်။
aပြီလတွင်သန်းကြွယ်သူဌေးများဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးပြန်လည်ဆိုးရွားလာပြီး HTC ၏ဆိုးရွားသည့်ရလဒ်များကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
HTC တွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းအသစ်ရှိသည်။ ၎င်းသည် Geekbench စံနှုန်းတွင် '2Q741' နံပါတ်အောက်တွင်တွေ့ရသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာကိုကာကွယ်ရန် HTC သည် Blockchain စနစ်ဖြင့်ပထမဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်သောစမတ်ဖုန်းဖြစ်သည့် Exodus ကိုဆက်ခံရန်ပြင်ဆင်နေသည်။
ထိုင်ဝမ်မှထုတ်လုပ်သည့် HTC သည် Play Store မှအက်ပလီကေးရှင်းအမျိုးမျိုးကိုရုပ်သိမ်းခဲ့သော်လည်းသင်သည်မိုဘိုင်းဖုန်းပြိုင်ဆိုင်မှုမှရုပ်သိမ်းရန်အနာဂတ်အစီအစဉ်မရှိဟုထင်ရသည်။
HTC သည်နမူနာနမူနာများကို ပေး၍ AnTuTu တွင်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သည့်အလယ်အလတ်တန်းစားမော်ဒယ်လ်ကိုမှတ်ပုံတင်ထားသည်
HTC မှပုံစံအသစ်တစ်ခုလာပါပြီ။ ၎င်းသည် AnTuTu's Weibo စာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားပြီးအချို့သောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ရမှတ်များကိုဖော်ပြသည်။
ယခုနှစ်တွင် HTC သည် 5G စမတ်ဖုန်းကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်
ယခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သော 5G စမတ်ဖုန်းကို HTC စတင်ရန် HTC ၏အစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ကုမ္ပဏီမှအတည်ပြုသည့်အတိုင်း HTC Pie U11, U11 + နှင့် U12 + အတွက် Android Pie update ကိုဖြန့်ချိမည့်နေ့အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏အနာဂတ်အတွက်ဘဏ္badာရေးအခြေအနေဆိုးရွားလာစေရန် HTC ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုလိုင်စင်ချပေးရန်အစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
သင်သည် HTC ငွေကိုစစ်မှန်သောငွေဖြင့်ဝယ်နိုင်သည်
HTC မှမဟာဗျူဟာပြောင်းလဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက၎င်းကိုမတ်လတွင်စစ်မှန်သောငွေဖြင့်၎င်း၏ထွက်ကုန်မော်ဒယ်ကိုသင်ဝယ်ယူနိုင်လိမ့်မည်။
2019 ၏ပထမနှစ်ဝက်တွင်၎င်း၏ကြိုးပမ်းမှုများသည်အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းလွှတ်တင်မှုများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်လိမ့်မည်ဟု HTC မှအတည်ပြုခဲ့သည်။
HTC Desire 12s - HTC ၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်
တရားဝင်တင်ဆက်ထားပြီးဖြစ်သောအလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းအသစ်ဖြစ်သော HTC Desire 12s ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
HTC ၏ blockchain စမတ်ဖုန်းတွင်တင်သည့်နေ့စွဲရှိသည်
HTC Exodus တွင်တရားဝင်တင်ဆက်သည့်ရက်စွဲရှိသည်။ ယခုလတွင်ထုတ်ဖော်ပြသမည့်တံဆိပ်၏ blockchain ဖုန်းရောက်ရှိလာခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
HTC U12 Life: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်တရားဝင်စတင်ခြင်း။ အားလုံးထိုင်ဝမ်ထုတ်လုပ်သူထံမှအလယ်အလတ်အကွာအဝေးအကြောင်းကိုအားလုံးရှာဖွေပါ။
Snapdragon 12 SoC ဖြင့် HTC U636 Life သည် Geekbench တွင်ပေါက်ကြားသည်
HTC U12 Life သည် SD636 ဖြင့် Geekbench ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။ နောက်လာမည့်အလယ်အလတ်အဆင့်ကုမ္ပဏီ၏အချက်အလက်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
HTC U12 + တွင်အဆင့်မြှင့်မှုအသစ်များနှင့် CryptoKitties အသစ်များဖြင့်စတင်ခဲ့သည်
HTC U12 Plus သည်အသစ်ပြင်ဆင်မှုအသစ်ရရှိပြီးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်အထွေထွေစွမ်းဆောင်ရည်ကဏ္ section တို့တွင်တိုးတက်မှုများစွာရှိသည်။ Plus အားက CryptoKitties နှင့်အတူပါလာ!
Android 9.0 Pie သို့မည်သည့်ဖုန်းများကိုအဆင့်မြှင့်တင်မည်ကို HTC မှကြေငြာခဲ့သည်။ ပထမ ဦး ဆုံး update လုပ်မည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ပထမဆုံးဖုန်းစာရင်းကိုရှာဖွေပါ။
HTC သည် ၁၅ နှစ်အတွင်းအဆိုးရွားဆုံးငွေတောင်းခံမှုကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်
ဇူလိုင်လတွင် HTC ၏လည်ပတ်မှု ၇၇ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်။ ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီ၏လည်ပတ်ငွေကြေးကျဆင်းမှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ချောမွေ့သောအလိုအလျောက် zoom နှင့်လုပ်ဆောင်မှုအသစ်များကိုထည့်ခြင်းဖြင့် HTC U12 + ကိုအဆင့်မြှင့်သည်
ယခုနှစ် HTC ၏အထင်ကရ terminal ဖြစ်သော HTC U12 + သည်ဗီဒီယို mode တွင်အလိုအလျောက် zoom ကိုတိုးတက်စေသည့် update အသစ်တစ်ခုကိုစတင်ရရှိခဲ့သည်။
ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီ HTC ကကမ္ဘာတဝှမ်းတွင်၎င်း၏လုပ်သားအင်အား၏ ၂၂% ကိုအလုပ်မှထုတ်ပယ်ရန်သဘောတူညီမှုတစ်ခုရရှိထားပြီဟုကြေငြာခဲ့သည်။
HTC Desire 12+ ကိုယနေ့စပိန်နိုင်ငံမှကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများအရစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရနိုင်သည်။ ငါတို့ကိုမင်းကိုပြတယ်။
HTC U12 + - HTC ၏ flagship အသစ်သည်ယခုတရားဝင်ဖြစ်သည်
HTC U12 +: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်တရားဝင်စတင်ခြင်း။ ယနေ့တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သောထိုင်ဝမ်ထုတ်လုပ်သူ၏စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
အသစ်ထွက်ပေါ်လာသည့်အချက်အလက်များအရ HTC U12 Plus သည် Qualcomm Snapdragon 845 နှင့် 8GB RAM ပါဝင်သည်
HTC U12 သည်၎င်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ဤပစ္စည်းသည်ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးနှင့်အတူလာလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်တစ်ချိန်ကအကောင်းဆုံးသောအချိန်၌အမှတ်တံဆိပ်ရှိခဲ့သည့်အောင်မြင်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ငါတို့ကိုပြောတယ်
HTC U12 ၏ထင်မြင်ချက်ဒီဇိုင်းပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ယခုနွေ ဦး ရာသီတွင်စျေးကွက်၌စတင်ဖြန့်ချိမည့်အဆင့်မြင့်အမှတ်တံဆိပ်အကြောင်းနှင့်ပိုမိုရှာဖွေပါ၊
HTC U12 + ၏ပထမဆုံးသတ်မှတ်ချက်များကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
ပထမ ဦး ဆုံး HTC U12 + သတ်မှတ်ချက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်သောကုမ္ပဏီ၏အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
HTC သည် HTC U12 + ကိုယခုနှစ်အကုန်ပိုင်းတွင်သာစတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ အဆင့်မြင့်ဖုန်းတစ်လုံးတည်းသာတပ်ဆင်ခြင်းပါဝင်သည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၂၀၁၈ အတွက်ကုမ္ပဏီ၏အစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
HTC နှင့် Motorola တို့ကသူတို့၏ဖုန်းဟောင်းများနှေးကွေးခြင်းမရှိဟုဆိုကြသည်။ Apple အရှုပ်တော်ပုံအပြီးတွင်ကုမ္ပဏီနှစ်ခု၏ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်များအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
HTC Ocean Harmony ၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
HTC သမုဒ္ဒရာသဟဇာတ - သတ်မှတ်ချက်များဖော်ပြသည်။ 2018 ခုနှစ်တွင်စျေးကွက်ထိုးဖောက်သော HTC ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
HTC U11 Life: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ ကောင်းသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူ HTC အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Android One ဖြင့် HTC U11 Life ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သည်
Android Ubuntu operating system အနေဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သော HTC ၏အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်း HTC HTC U11 Life ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလေ့လာပါ။
နောက်ထပ် HTC U11 Plus ၏ပထမဆုံးပြန်ဆိုချက်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ
HTC သည်၎င်း၏စမတ်ဖုန်းသစ် U11 Plus ကိုနိုဝင်ဘာ ၂ ရက်တွင်တင်ပြမည်ဖြစ်သော်လည်းယခုမိုဘိုင်း၏ပထမဆုံး rendering ပုံများပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
ဘာလင်ရှိ IFA တွင် HTC U11 ကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်ဗီဒီယိုအပေါ်ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များ။ မျက်လုံးအားလုံးကိုဆွဲဆောင်နိုင်မည့်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းရှိသောဖုန်းတစ်လုံး။
Android 11 ပါသော HTC U8.0 တွင် Bluetooth 5.0 ရှိမည်ဟု HTC ကအတည်ပြုသည်
Google ၏မိုဘိုင်း operating system သစ် Android 8.0 "O" သည် HTC U5.0 အပါအဝင်ရွေးချယ်ထားသောထုတ်ကုန်များတွင် Bluetooth 11 ကိုအထောက်အပံ့ပေးလိမ့်မည်။
HTC U11 တွင် Bluetooth5ကိုလာမည့် software update တွင်ထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်
ဟာ့ဒ်ဝဲအားပြုပြင်စရာမလိုပဲ Bluetooth 11 နှင့်လိုက်ဖက်သောပေါင်းစပ်မှုပြုလုပ်နိုင်မည့် HTC U5 အတွက်ဆော့ (ဖ်) ဝဲအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကို HTC မှထုတ်ပြန်မည်
ဤသည်မှာ HTC U11 အတွက်ရနိုင်သောအရောင်အသစ်ဖြစ်ပြီးသင်နှစ်သက်မည်
OnePlus 11 ကိုစတင်မိတ်ဆက်နိုင်သည့်နေ့၌ပင် HTC ကုမ္ပဏီသည် HTC U5 Solar Red edition အတွက်ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်သံသယဖြစ်စရာများကိုဖွင့်ပေးလိုက်သည်။
ဤသည် HTC U11 အသစ်ဖြစ်ပြီးအကျွမ်းတဝင်ရှိသော်လည်းအသစ်ဖြစ်သည်
အစွမ်းထက်။ ခံနိုင်ရည်ရှိပြီးအကောင်းဆုံးကင်မရာဖြင့်ဖန်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော HTC U11 အသစ်ကိုတရားဝင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
HTC U 11 တွင် ၃၆၀ ဒီဂရီမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်
HTC မှအသစ်သော HTC U 11 ဟုခေါ်သည့်အလံသည် ၃၆၀ ဒီဂရီမှတ်တမ်းတင်နိုင်စွမ်းရှိသည်ဟုကုမ္ပဏီမှကြော်ငြာချက်အသစ်တစ်ခုအရသိရသည်။
HTC U 11 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများကိုလုံးလုံးလျားလျားစစ်ထုတ်သည်
မကြာသေးမီက HTC U 11 ၏လက်လီရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုသည်ပေါက်ကြားခဲ့ပြီး HTC ၏စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
တရားဝင်တရားဝင်ဖြန့်ချိမည့်မေလ ၁၆ ရက်တွင်စတင်မည့် HTC U 11 ၏နောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် HTC U 16 ၏အသစ်တီထွင်မှုအသစ်ကို HTC ကတင်ပြခဲ့သည်။
HTC U ကိုမေလ ၁၆ ရက်နေ့တွင်တင်ပြမည်
HTC ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်မေလ ၁၆ ရက်တွင်၎င်း၏နောက်ထပ်အလံဖြစ်သည့်ဖိအားခံစားနိုင်သောဘေးထွက်ဘောင် HTC U iling ကိုကြေညာခဲ့သည်
HTC U Ocean - ပထမဆုံးဓာတ်ပုံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
HTC ၏အနာဂတ်အလံကို U Ocean ဟုခေါ်တွင်ပြီးမကြာမီလာမည်။ ၄ င်း၏အဓိကဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် terminal ၏ပထမ ဦး ဆုံးဓာတ်ပုံများကိုဖော်ပြသည်။
HTC One X10 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ၎င်းသည်ယူရို ၂၀၀ တန်တရုတ်ဆိပ်ကမ်းများနှင့်မျှဝေသည့်နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သည်။
HTC သည်၎င်း၏ HTC U Ultra စမတ်ဖုန်းအသစ်ကို Sapphire Crystal ဖြင့်ဥရောပတွင်ရောင်းချရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ စျေးနှုန်းက ၈၄၉ ယူရိုဖြစ်ပြီး849ပြီ ၁၈ ရက်မှာရောက်မယ်။
HTC သည် Edge ပုံစံ terminal အသစ်ကိုပြင်ဆင်နေသည်။ HTC Edge?
HTC Edge (သို့) HTC Sense Edge က HTC သုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်အသစ်ကဘာကိုပြသတာလဲ။ interface အသစ်ဒါမှမဟုတ် Edge ပုံစံစမတ်ဖုန်းအသစ်လား။
HTC X10 သည်သင်နှင့်တွေ့ဆုံရန်ယခုကမ်းလှမ်းသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်ရုပ်ပုံများစွာဖြင့်ထွန်းသစ်စစျေးကွက်များအတွက်ရည်ရွယ်သည်။
Leaking က HTC 835 အတွက် Snapdragon6chip နှင့် 11GB RAM ကိုပြသလိုက်သည်
ယိုစိမ့်မှုအသစ်သည် HTC 11 ၏ Snapdragon 835 နှင့်6GB RAM ပါသောသော့ချက်ကျသောသတ်မှတ်ချက်များကိုဖော်ပြသည်။
ပရိသတ်များက HTC Ultra အပေါ်သူတို့၏ထင်မြင်ချက်ကိုပေးသောဗွီဒီယိုကို HTC ကထုတ်ဝေသည်
အမှတ်တံဆိပ်၏ပရိသတ်များသည်ပထမဆုံးအကြိမ်စမ်းသပ်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော Pablet အသစ်ဖြစ်သော HTC U Ultra ကို HTC ကဗီဒီယိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။
HTC သည် Samsung လုပ်ထားသည့်ဂိမ်းနှင့်မကင်းလိုဘဲ HTC 835 ရှိ Snapdragon 11 ချစ်ပ်ကိုစောင့်ဆိုင်းလိုသည်။
Sony နှင့် ZTE ကဲ့သို့ HTC သည်၎င်း၏အသစ်စက်စက် HTC 10 သစ်အတွက် Nougat update ကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။
၎င်း ၀ တ်ဆင်နိုင်သောကိရိယာသည် FCC မှဖြတ်သန်းသွားသော HTC Vive အမှတ်တံဆိပ်ပါ ၀ င်သည့်အရာအားလုံးသည်အံ့သြစရာဖြစ်သည်။
၁၄၆ ရက်အကြာတွင် HTC One A9 သည် Nougat update ကိုရရှိသည်
HTC သည် Android Nougat ကို ၁၄၆ ရက်အကြာတွင် HTC A146 သို့ကတိပေးထားသည့်အတိုင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သင် terminal ကိုအသုံးပြုသောကြော်ငြာအတွက်ချဲ့ကားပြောသောနှောင့်နှေးမှု။
Android Nougat သည်မျှော်လင့်ထားသည်ထက်ပိုမိုပြmoreနာများပေးနေသည်။ ၎င်းသည်နောင်လာမည့် ၃ ပတ်အတွင်း HTC 10 မှရရှိလိမ့်မည်။
ယခုနှစ်တွင် HTC သည်ဆိပ်ကမ်းအနည်းငယ်သာရှိတော့မည်ဖြစ်သည်
၂၀၁၇ အတွက် HTC ၏အစီအစဉ်သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သောစမတ်ဖုန်းများ၏ထက်ဝက်ကိုသူတို့အကောင်းဆုံးအခြေအနေသို့ရောက်ရှိရန်ဖြစ်သည်။
HTC U Ultra နှင့် U Play သည်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းများနှင့်မတူညီသောသတ်မှတ်ချက်များဖြင့်တရားဝင်ဖြစ်သည်
HTC သည် HTC U Ultra နှင့် HTC U Play စမတ်ဖုန်းနှစ်မျိုးစလုံးကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးမတူညီသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဖုန်းနှစ်မျိုးနှင့်ပထမမျက်နှာပြင်တွင်ဒုတိယမျက်နှာပြင်ပင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
HTC Ocean Note သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအပိုများဖြင့် Google Pixel ကဲ့သို့ကင်မရာကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်
ဤအချက်ကိုဆိုလိုသည်မှာ HTC Ocean Note သည် Google Pixel ၏အံ့မခန်းသောဓာတ်ပုံ၏အရည်အသွေးကိုကျော်လွန်သွားနိုင်သည်။
U Ultra (သို့) Ocean Note ဟုရည်ညွှန်းသည် HTC သည်ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်တွင် HTC ၏ Note 12 ၏နေရာကိုသိမ်းဆည်းမည့်ဖုန်းသုံးလုံးထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
Ocean က Note ကိုအရည်အသွေးမြင့်ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ပြီး၎င်းသည် Google နှင့် Pixels ကိုဖန်သားပြင်နှင့်ဓာတ်ပုံထက်သာလွန်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားသည်။
HTC သည်၎င်းအတွက် "အတွက် U" (သင်အတွက်) ခေါ်ဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်တွင်ရုပ်ပုံများကိုဝေမျှထားသည်။
HTC 11 ၏သော့များ (သို့) HTC Ocean ဟုခေါ်သည်
Google Pixel မှလေကောင်းလေသန့်ရှူနိုင်လျှင် HTC 11 သည်ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီအတွက်မတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်ကိုဆိုလိုသည်။
သော့ဖွင့်ထားသော HTC 10 ဗားရှင်းများသည် Android Nougat ကိုစတင်ရရှိသည်
HTC 10 သည်အခြားထုတ်လုပ်သူများထံမှ beta ၌ရှိနေဆဲဖြစ်သော Android Nougat သို့ update ကိုတရားဝင်လက်ခံရရှိသည်။
HTC Desire 650 ကိုကျောဘက်တွင်ဆုပ်ကိုင်ထားသောဒီဇိုင်းဖြင့်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်
HTC Desire 650 ၏နောက်ကျောတွင်မိုဘိုင်းဖုန်းကအလွယ်တကူလျှောကျနေသည့်သူများအတွက်၎င်း၏အသေးစိတ်ကျသည့်အသွင်အပြင်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များရှိသည်။
HTC Bolt ကိုလွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်း Sprint တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ယခု HTC2evo ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိသီးသန့်ဖုန်းအသစ် HTC Bolt
သူ၌ Snapdragon 810 ချစ်ပ်အနည်းငယ်ကျန်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့နှင့်အတူ HTC Bolt ကိုအမေရိကန်တွင်သီးသန့်ထားရှိသည်။
HTC Sense7နှင့်ဇာတိ HTC အက်ပ်များအားလုံးကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်သင်၏ Android ကို HTC တစ်ခုအဖြစ်မည်သို့ပြောင်းလဲရမည်နည်း
ယနေ့ငါအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်သော Blinkfeed နှင့်ဇာတိ HTC အက်ပ်များဖြင့် HTC Sense7ကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်သင်၏ Android ကို HTC တစ်ခုအဖြစ်မည်သို့ပြောင်းလဲရမည်ကိုကျွန်ုပ်ပြသမည်။
HTC Ocean သည်စမတ်ဖုန်းလောကတွင်တစ်စုံတစ် ဦး ဖြစ်ရန် HTC ၏ကြီးမားသောအလောင်းအစားဖြစ်သည်
နောက်ဆုံးတွင် HTC Ocean တည်ရှိမှုကိုအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်။ HTC သည်ဤစမတ်ဖုန်းများတွင်တစ်စုံတစ် ဦး ဖြစ်ရန်ထပ်မံပြင်ဆင်နေသည့် terminal အသစ်ကိုအတည်ပြုလိုက်သည်။
HTC သည်ခိုင်မာမှုကို ဆက်လက်၍ ဆက်လက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ပုံရိပ်အသစ်များရှိသော HTC Bolt ကဲ့သို့စမတ်ဖုန်းအသစ်များကိုစတင်ရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်
HTC နှင့် Under Armor မှ Android Wear စမတ်နာရီအဖြစ်ပုံရိပ်နှစ်ခုသည်တရုတ်လူမှုကွန်ယက် Weibo မှပေါက်ကြားခဲ့သည်
HTC Bolt သည်ယနေ့ခေတ်ဖုန်းအများစု၏စံအသံအပေါက်ထုတ်လုပ်မှုကိုစွန့်လွှတ်မည့် Android terminal တစ်ခုဖြစ်သည်။
HTC မှအသစ်ဖြစ်သော Desire 10 Pro နှင့် Desire 10 လူနေမှုပုံစံစတဲ့
HTC က ၄ င်း၏အလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းအသစ်များဖြစ်သော HTC Desire 10 Pro နှင့် HTC Desire 10 လူနေမှုပုံစံစတဲ့နှစ်မျိုးရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုကြေငြာလိုက်သည်။
HTC သည် RAM နှင့် ၅.၅ လက်မ HD ဖန်သားပြင်ရှိ Desire 10 Lifestyle အသစ်၏အတွင်းမှတ်ဉာဏ်တွင်မူကွဲနှစ်ခုကိုစတင်ပါလိမ့်မည်။ Desire 5,5 Pro ထက်နိမ့်သည့်ဖုန်းဖုန်း
HTC သည် Desire 10 Pro ကို ၅.၅ လက်မမျက်နှာပြင်၊ 5,5GB RAM နှင့် fingerprint sensor ပါရှိသည်။ ကျနော်တို့စျေးနှုန်းမသိရပါဘူး
HTC မှ Desire 10 အသစ်ကိုလာမည့်အပတ်တွင်ကြေညာမည်
HTC သည် Desire 20 စတိုင်နှင့် Desire 10 Pro အသစ်နှစ်ခုကြေငြာရန်စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင်စီစဉ်ထားသည့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုရှိပြီးဖြစ်သည်။
Desire လိုင်းသည် Lifestyle နှင့် Pro ဟုသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အလွန်ကွာခြားမည့်ဖုန်းနှစ်မျိုးတွင်ထပ်မံအသုံးပြုလိမ့်မည်။
HTC က One A9s ကို ၅ လက်မ 5p မျက်နှာပြင်နှင့် Helio P720 ချစ်ပ်များဖြင့်ဖော်ပြသည်
HTC သည် ၅.၅ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့် Helio P9 ချစ်ပ်များကိုထုတ်ဖော်ပြသသည့် One A9s ဖြင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က One A5,5 သို့ဖုန်းဆက်ခဲ့သည်။
ထိုင်ဝမ်မှထုတ်လုပ်သူသည် HTC 10 ရောင်းချမှုနိမ့်ကျမှုကိုဖြစ်နိုင်ချေရှိသော HTC Desire 10 Pro နှင့်ယနေ့တွင်ပေါက်ကြားခဲ့ခြင်းကိုသက်သာစေရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှာဖွေနေသည်။
HTC သည်ယခုနှစ်နောက်ဆုံးသုံးလပတ်အတွင်း Nougat သို့အဆင့်မြှင့်တင်မှုပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ HTC 10, One M9 နှင့် One A9
ထိုင်ဝမ်မှထုတ်လုပ်သူသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိသန်းနှင့်ချီသောလူများစိတ်ဝင်စားသည့်ထုတ်ကုန်ကို HTC 10 နှင့်တောင်မှမတင်နိုင်ပါ။
သတိပေးချက်အနေဖြင့် HTC သည် tweet တစ်ခုပို့ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Android 7.0 Nougat ကို HTC 10, One M9 နှင့် One A9 သို့လွှတ်တင်လိမ့်မည်ဟုမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
Co-Founder နှင့် CEO ဖြစ်သူ Peter Chou က Goodbye ကို HTC သို့ပြောကြားခဲ့သည်
Peter Chou သည် HTC ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီ၏အချိန်အားဖြင့်အချိန်မီပြောင်းလဲမှုကိုအနားယူရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။
HTC Desire 628 ကိုဇူလိုင်လတွင်စပိန်နိုင်ငံတွင်စတင်ဖြန့်ချိမည်ဖြစ်ပြီးတန်ဖိုးအနေဖြင့်ယူရို ၂၅၀ ခန့်ရှိမည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုတင်ပြမည်ဖြစ်သည်။
ယနေ့ခေတ်တွင်ကျော်ကြားသည့် Evan Blass မှကျွန်ုပ်တို့သိရှိခဲ့သည့်အတိုင်း HTC သည်စမတ်နာရီကိုထုတ်လုပ်ရန်အတွက်ကျလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သည်။
HTC သည်ဝင်ငွေ ၇၈% ကျဆင်းမှုနှင့်အတူအတော်လေးဆိုးရွားသည့်ရလဒ်များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်၊ အကောင်းဆုံးမှာ HTC 78 သည်ထိုကိန်းဂဏန်းတွင်မပါဝင်ပါ။
ယူရို ၂၈၀ ခန့်အတွက် HTC Desire 280 အသစ်ကိုသင် ၀ ယ်နိုင်သည်။ ပလတ်စတစ်ဖြင့်ပြီး။ 830GB Internal Memory နှင့် 32GB RAM ။
HTC သည် Helio X9 ချစ်ပ်ပါဝင်သည့် One S10 ကိုယူရို ၄၉၉ ဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းတွင် 499GB memory နှင့် 16GB RAM တို့ဖြင့်ဆက်လက်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ အခြားမိုဘိုင်းဖုန်းများမှာတွေ့ရတဲ့အရာအတွက်ရှားပါးတဲ့အရာ
HTC Desire 830 သည်မီဒီယာဂိမ်းကို Mediatek ချစ်ပ်နှင့်ထိုးဖောက်ပြီးပလတ်စတစ်ဖြင့်ပြီးဆုံးစေရန်ထိုင်ဝမ်မှထုတ်လုပ်သူ၏လောင်းကစားဖြစ်သည်။
Facebook Messenger ကိုမကြာခင်တိုက်ခိုက်တော့မည်
Facebook Messenger သည်အခြားသူများနှင့်မတူဘဲအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ကုမ္ပဏီများနှင့်အဆက်အသွယ်မပြတ်စေရန်ကူညီခြင်းပြုလုပ်ရန်စကားဝိုင်းများတွင်စက်ရုပ်များပါလာမည်
HTC သည် HTC 10 ကို ၅.၂ လက်မ QHD မျက်နှာပြင်၊ Snapdragon 5,2 ချစ်ပ်၊ RAM 820GB နှင့်€4ဖြင့်စတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။ မေလတွင်စပိန်နိုင်ငံတွင်ရနိုင်သည်။
HTC 10 စတင်ပြီးတစ်ရက်တွင်ဤအထင်ကရအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြသသည့်တင်ဆက်မှုဗီဒီယိုပေါက်ကြားခဲ့သည်။
Twitter အကောင့်တစ်ခုမှ HTC 10 ၏ရှေ့ကင်မရာ၏အရည်အသွေးကိုပြသသည့် selfies ရုပ်ပုံလေးခုမျှဝေလိုက်သည်
HTC 10 တွင် Snapdragon 652 နှင့် 3GB RAM ပါ ၀ င်သည့်မော်ဒယ်လ်တစ်ခုရှိမည်
Snapdragon 10 ချစ်ပ်နှင့် RAM မှတ်ဥာဏ် 652GB ပါ ၀ င်သည့် HTC က၎င်း၏ HTC ၏မော်ဒယ်တော်တော်များများကိုပြင်ဆင်ထားပုံရသည်။
နောက်ဆုံးတွင် HTC 10 ကိုwebsiteပြီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင်၎င်း၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှအွန်လိုင်းတွင်ပြသမည့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြင့်ပြသလိမ့်မည်။
@evleaks ၏အဆိုအရ HTC တွင် Super LCD5မျက်နှာပြင်နှင့် 3.000 mAh ဘက်ထရီရှိမည်ဖြစ်ပြီး Super AMOLED နှင့်ပတ်သက်သောကောလာဟလများကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။
HTC 10 နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သိရှိသမျှ
HTC 10 ကို19ပြီလ ၁၉ ရက်တွင်ပွဲထုတ်မည် ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤထင်ရှားသောစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သိရှိထားသောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုမျှဝေသည်
HTC 10 ၏နောက်ထပ်ပုံရိပ်များပေါက်ကြားလျက်ရှိသည်
ကျွန်ုပ်တို့တွင် HTC 10 ၏ပုံရိပ်ကောင်းများရှိသည်။ ထိုင်ဝမ်မှထုတ်လုပ်သူ၏အဓိကလုပ်ငန်းကိုနီးကပ်စွာနီးကပ်စွာသိရှိစေရန်အတွက်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အစစ်အမှန်နှစ်မျိုးစလုံးရှိသည်။
HTC One M10 ဖြန့်ချိသည့်ရက်သည်Aprilပြီ ၁၉ ရက်တွင်ပေါက်ကြားခဲ့သည်
19ပြီလ ၁၉ ရက်သည်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော HTC One M10 ကိုထုတ်လုပ်သူနှင့် ပတ်သက်၍ မျှော်လင့်ချက်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည့် HTC One MXNUMX စတင်မည့်နေ့ရက်ဖြစ်သည်။
HTC သည် HTC One M10 စတင်မိတ်ဆက်စဉ်ကဤအရာအားလုံးကိုပြီးပြည့်စုံစေရန်အလိုရှိသည်။ သူကမျှော်လင့်ချက်တွေတိုးပွားစေဖို့နောက်ထပ်ပြောင်မြောက်တဲ့ဖြန့်ချိခဲ့သည်
မနေ့က ၁၀ မိနစ်အတွင်း HTC သည် HTC Vive နှင့်ထုတ်ကုန် ၁၅၀၀၀ ကိုရောင်းချခြင်းဖြင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်
Phoenix ကဲ့သို့ပင် HTC သည်ပြာ မှနေ၍ HTC Vive ၏လက်တွေ့ဘဝနှင့် Valve နှင့်မိတ်ဖက်ဖြစ်ခြင်းမှပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာသည်။
HTC သည်၎င်း၏ flagship One M10 ကိုမျှော်လင့်နေသည့်ပုံတစ်ပုံကိုထုတ်ဝေသည်
One M10 သည် HTC ၏ထင်ရှားသောအသစ်သောအမှတ်အသားဖြစ်လိမ့်မည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဒီဇိုင်းရှိလိုင်းအချို့နှင့်မိတ်ဆက်ပေးမည့် teaser image ရှိသည်
ယိုစိမ့်သောပုံရိပ်အသစ်ကကျွန်ုပ်တို့ကို HTC One M10 ရှေ့တွင်ထားခြင်း
ကျနော်တို့ leaker Evan Blass မှလာသည့် HTC One M10 ၏ပုံရိပ်အသစ်ရှိသည်။ အများကြီးမျှော်လင့်ထားသည့်အနေဖြင့်တစ် ဦး ကဖုန်း။
HTC One M10 ကင်မရာတွင် Nexus 5X နှင့် Nexus 6P နှင့်ဆင်တူသည့်အာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်။
၎င်းသည် HTC One M ၏ပထမဆုံးအစစ်အမှန်ပုံရိပ်ဖြစ်နိုင်သည်
သူတို့ရဲ့တင်ပြချက်ကိုကြေညာဖို့ထုတ်လုပ်သူနည်းပါးလာသည်။ ပြီးတော့ HTC တွေထဲကတစ်ခုပါ။ သူတို့သည် HTC ကိုမတင်ပြပါက ...
GFXBench မှ စ၍ HTD Desire T7 တက်ဘလက်အသစ်သည် 1 GB RAM နှင့် ၆.၉ လက်မဖန်သားပြင်တို့အတွက်ထင်ရှားသည်။
မတ်လတွင်အာရှထုတ်လုပ်သူက၎င်း၏နောက်ထပ်ထင်ရှားသည့် HTC M10 ကိုပြသနိုင်သည်။
ကောလဟာလများတွင် HTC Nexus ထုတ်ကုန်နှစ်ခုသည် T50 နှင့် T55 များရှိသည်
နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကတော့ Nexus အသစ်နှစ်ခုနှင့်ပတ်သက်ပြီး HTC သည် T50 နှင့် T55 နှင့်အတူတီထွင်ရန်တာဝန်ရှိသည်
Weibo မှယုံကြည်စိတ်ချရသောရင်းမြစ်မှဖော်ပြချက်အရ HTC သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Nexus စမတ်ဖုန်းနှစ်လုံးကိုစတင်မိတ်ဆက်ရန်တာဝန်ရှိသည်ဟုထင်ရသည်။
Virtual reality ပစ္စည်းအတွက်ကြိုတင်မှာယူမှုများ HTC Vive ကိုဖေဖော်ဝါရီ ၂၉ ရက်တွင်စတင်မည်
HTC Vive မှာကြိုတင်မှာကြားထားသည့်နေ့ရက်ရှိပြီးဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီ ၂၉ ရက်ဖြစ်သည်။ စျေးနှုန်းကတော့ကျွန်ုပ်တို့မသိသော်လည်းမည်သည့်စျေးနှုန်းနှင့်မဆိုစျေးပေါမည်မဟုတ်ပါ။
HTC One X9 သည်ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ ထိုင်ဝမ်မှထုတ်လုပ်သူက၎င်း၏ repertoire သို့ terminal အသစ်တစ်ခုထည့်သွင်းလိုသည်။
မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုအတွက်ကုမ္ပဏီဖုန်းများရောင်းချခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်အတွက် HTC အတွက်ထိုးနှက်ချက်အသစ် - Deutsche Telekom
HTC တွင်နာမည်မရှိပါ။ သူတို့ကဆပ်ကပ်နဲ့ထောင်ပြီးထောင်တတ်တယ်။ ထိုင်ဝမ်မှထုတ်လုပ်သူသည်၎င်း၏အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးအခြေအနေကိုမဖြတ်သန်းနိုင်သေးဘဲယခုအသစ်ထိုးဖောက်ခြင်းခံရသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့အထိ HTC သည်မိုဘိုင်းဖုန်းအော်ပရေတာဖြစ်သည့် Deutsche Telekom နှင့်မည်သည့် terminal ကိုမဆိုရောင်းချနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။
ငါတို့ HTC သည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များကိုကြိုတင်မြင်တွေ့ရန်အဆင်သင့်ရှိသည်၊ HTC One X9 သည်ခြွင်းချက်ဖြစ်မည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သည်။ မနေ့ကမင်းတို့ပထမဆုံးဓါတ်ပုံတွေကိုငါတို့ပြပြီးပြီဆိုရင်တော့အခုတော့ HTC One X9 ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်များအားလုံးကိုအသေးစိတ်ပြသသည့်ပြခန်းတစ်ခုလုံး၏အလှည့်ဖြစ်သည်။
အသစ်ပြောင်းခြင်းပြက္ခဒိန်ကို HTC မှ Android 6.0 M သို့စစ်ထုတ်သည်
Andrid 6.0 Marshmallow သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့် HTC ကိရိယာအားလုံးနှင့်စာရင်းတစ်ခုအားပေါက်ကြားထားသည်။
HTC One X9 ၏ပုံရိပ်အသစ်များပေါ်လာမည်
HTC One X9 ၏နောက်ကျောအပေါ်ဘက်ရှိ Nexus 6P နှင့်ဆင်တူသည့်အပေါ်ဘက်ဘားကိုပြသထားသည့်ပုံများတွင်ပါရှိသည်။
နောက်ဆုံးထုတ် HTC ရောင်းချမှုအစီရင်ခံစာအရ HTC A9 စတင်ခြင်းကြောင့်ကုမ္ပဏီသည်ရောင်းအားကိုတိုးတက်စေခဲ့သည်
TENAA မှယိုစိမ့်မှုကြောင့်၊ ၎င်း၏အနာဂတ် terminal ၏အရေးကြီးဆုံးသတ်မှတ်ချက်များဖြစ်သော HTC ONE X9 ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။
HTC One A9: 699 ယူရို၏စျေးနှုန်းကိုကြေငြာပြီးနောက် HTC သည်ခြေထောက်တွင်နောက်တစ်ဖန်ပြန်လည်ပစ်ခတ်သည်။ အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းအတွက်အလွန်စျေးကြီး
HTC One X9, HTC ၏အဆင့်မြင့်ဖုန်းအသစ်၏ဒီဇိုင်းကိုပြသသည့်ပိုစတာတစ်ခုပေါက်ကြားခဲ့သည်။
HTC ကခိုင်မာစွာလောင်းသည်။ ၎င်း၏နောက်ထပ် terminal သည် iPhone ကိုငြူစူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
လက်ရှိ HTC ၏ဥက္ကpresident္ဌသည်ဤကုမ္ပဏီ၏ပရိသတ်များအတွက်နောက်ထပ် terminal တစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ကတိပေးသောကြေညာချက်များထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
HTC One A9 ၏ပထမဆုံးအစစ်အမှန်ရုပ်ပုံများပေါ်လာသည်
ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့သည် HTC terminal အသစ်၏ရုပ်ပုံများကိုပြန်လည်မြင်တွေ့ခဲ့ကြရသော်လည်းယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် HTC One A9 ၏ပထမဆုံးသောအစစ်အမှန်ပုံရိပ်များကိုတွေ့မြင်ရသည်။
HTC One A9 ကိုအရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့်စစ်ထုတ်ပြီး iPhone6နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်
HTC One A9 သည် HTC မျှော်လင့်ချက်အများဆုံးရှိသော terminal ဖြစ်သည်။ ယခုတွင်၎င်းသည်အရောင်အမျိုးမျိုးနှင့် iPhone6နှင့်ဆင်တူသည်ကိုမြင်တွေ့ရပြီ။
HTC One A9 သည် Android 6.0 Marshmallow ပါသည့်ပထမဆုံး Nexus မဟုတ်သောစမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်
Android9Marshmallow ဖြင့်ထွက်ပေါ်လာမည့် HTC One A6.0 ကြေငြာရန်ရွေးချယ်ထားသောနေ့သည် Nexus တင်ပြချိန်တွင်စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်ဖြစ်သည်။
တရုတ်ထုတ်လုပ်သူကသူ၏ဇာတိမြေတွင် ၅ လက်မရှစ်ခုရှိသည့် Android terminal အသစ်ဖြစ်သော HTC Desire 728 ကိုပြသခဲ့သည်။
တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ HTC Aero ၏အနာဂတ်ထင်မြင်ချက်သည်လက်ရှိ iPhone6နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။
ယိုစိမ့်မှုတစ်ခုအရ HTC flagship အသစ်ကို HTC O2 ဟုခေါ်မည်ဖြစ်ပြီးဖုန်း၏ကိုယ်ထည်အတွက်အလူမီနီယမ်ကိုသိမ်းထားမည်။
အလုပ်ဖြုတ်ခံရမှုများသည် HTC အပေါ်တွင်မူတည်နေသည်
သင်စျေးပေါသော HTC One M9 ကိုဝယ်ချင်ပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ Ebay မှာသူတို့ကို ၄၅၀ ထက်မနည်းရောင်းတယ်
သင်စျေးပေါသော HTC One M9 ကို ၀ ယ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှာနေသည်ဆိုပါကနောက်ထပ်မကြည့်ပါနှင့်။ Ebay တွင် ၄၄၅ ယူရိုဖြင့်ရနိုင်သည်။
HTC သည်ဆိုးရွားသည့်ဘဏ္newာရေးဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာအသစ်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဖြေ? ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသောစမတ်ဖုန်းမျိုးဆက်သစ်
HTC ၏ရောင်းအားသည်စတင်ဆိုးရွားလာသည်။ ထိုင်ဝမ်ထုတ်လုပ်သူသည်ဒေါ်လာ ၂၅၂ သန်းအထိအရှုံးပေါ်ခဲ့သည်။
HTC One M9 နှင့် One M8 ကို Android 5.1.1 Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်မည်
HTC One M9 နှင့် HTC One M8 ဆိပ်ကမ်းများသည်လက်ရှိတည်ရှိဆဲနောက်ဆုံးပေါ် Android 5.1.1 Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်လိမ့်မည်။
HTC Desire 626 သည် Moto G နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်စပိန်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်
ထိုင်ဝမ်အခြေစိုက်ထုတ်လုပ်သူ HTC Desire 626 မှအလယ်အလတ်တန်းစား terminal အသစ်သည် Moto G. နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်စပိန်သို့ရောက်ရှိမည်။
HTC One M8 ကို Android M သို့အဆင့်မြှင့်မည်
Mo Versi က HTC One M8 သည် Android M. နေ့သို့အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုလက်ခံလိမ့်မည်ဟုအတည်ပြုခဲ့သည်။ 2016 ဇန်နဝါရီလသို့မဟုတ်ဖေဖော်ဝါရီလမျှော်မှန်းထားသည်
သင် HTC One M9 Plus ကိုကြိုက်ပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ ဒါကအာရှဈေးကွက်မှာပါ
HTC သတင်းရပ်ကွက်များက HTC One M9 Plus သည်အာရှနှင့်အထူးသဖြင့်တရုတ်အသုံးပြုသူများအတွက်ရည်ရွယ်သောကြောင့်ဥရောပဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိမည်မဟုတ်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်။
ဤပြန်ဆိုချက်များသည် HTC One M9 / HTC Hima မည်သို့မည်ပုံအသေးစိတ်ကိုပြသသည်
ယခုတွင်ဖုန်းဒီဇိုင်နာမှယောက်ျားများသည်သူတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့် HTC One M9 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြသသည့်စီးရီးပြန်ဆိုချက်အချို့ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်နောင်လာမည့် HTC flagship အတွက်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောဒီဇိုင်းဖြစ်မလား။
HTC One M7 သည် Android 5.0 ကိုလက်ခံရရှိပြီးဖြစ်သည်
HTC One M7 သည် Android 5.0 ကိုလက်ခံရရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့်လာမည့်အပတ်တွင်သင်၏ပစ္စည်းကို OTA မှတဆင့်မွမ်းမံနိုင်သည်။
HTC A55၊ ၅.၅″ QHD မျက်နှာပြင်၊ Octa-core CPU၊ 5.5GB RAM နှင့် 3MP ကင်မရာပါဝင်သည့် Desire အသစ်။
HTC A55 သည်ယခုနှစ်တွင်ကုမ္ပဏီ၏အများဆုံးထပ်ကိန်းဖြစ်မည်မဟုတ်သော်လည်းအလွန်ကောင်းမွန်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များပါ ၀ င်သည့်အလွန်စိတ် ၀ င်စားဖွယ် Android ဖုန်းဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ဆင်သည် HTC Desire EYE ပေါ်သို့တက်ပါကမည်သို့ဖြစ်မည်ဟုသင်ထင်သနည်း။ ထိုကဲ့သို့သောကြီးစွာသောဖိအားပေးမှုအောက်မှာ terminal ကိုဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်သလား
HTC Desire 626 ကို MWC 2015 တွင်တင်ပြမည်လား။
ထိုင်ဝမ်ထုတ်လုပ်သူ Desire မိသားစုဝင်အသစ်ဖြစ်သည့် HTC Desire 626 ၏ပထမဆုံးပုံရိပ်များပေါက်ကြားခဲ့သည်။
Android 5.0 တစ်ခုလုံး၏ Android XNUMX သို့အသစ်ပြောင်းခြင်းရက်စွဲများကိုစစ်ထုတ်သည်
အချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော Android 5.0 L သို့အဆင့်မြှင့်ထားသော HTC Device များလက်ခံရရှိမည့်နေ့ရက်များမှာပေါက်ကြားခဲ့
HTC One M8 Developer Edition သည် Android 5.0 L ကိုလက်ခံရရှိပြီးဖြစ်သည်
HTC One M8 Developer Edition သည်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော Android 5.0 update ကိုလက်ခံရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်မကြာမီတွင် OTA ကိုထိုင်ဝမ်ထုတ်လုပ်သူ One One အတွက်စတင်မည်ဖြစ်သည်။
HTC One M8 သည်၎င်း၏ကျော်ကြားသော Sense 5.0 ထုံးစံအလွှာနှင့်အတူယခုလနှောင်းပိုင်းတွင် Android6Lollipop ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
Sony မှတရားဝင်အတည်ပြုထားပြီး Xperia Z စီးရီးအတွက် Android Lollipop ကိုဖေဖော်ဝါရီလတွင်ဖြန့်ချိမည်ဟုတရားဝင်အတည်ပြုခဲ့သည်
[SWEEPSTAKES] HTC Desire 816 ကို Androidsis နှင့် HTC Spain တို့ပါ ၀ င်သည်
Androidsis သည် HTC စပိန်နှင့် ပူးပေါင်း၍ ဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော Android စမတ်ဖုန်းကိုလုံးဝအခမဲ့ရရှိနိုင်မည့် HTC Desire 816 raffle ကိုကြေငြာသည်။
HTC ၏ Desire 320, နိမ့်နိမ့် terminal တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏စျေးနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီလိမ့်မည်
HTC သည်ယခုနှစ်၏ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်သည့် HTC Desire 320 - ကဏ္sectorတွင်အနိမ့်ဆုံးအကွာအဝေးပါ ၀ င်သည့် terminal တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် Android Lollipop ပါသော HTC One M8 ကိုတွေ့မြင်ရသောပထမဆုံးဗီဒီယိုများရှိပြီးဖြစ်သည်။
HTC One M8 ၏ပုံရိပ်များသည် Sense 6.0 နှင့်၎င်း၏ Android 5.0 Lollipop အရသာရှိသည်
Sense 6.0 သည် HTC One M8 အသုံးပြုသူများကိုဒီဇိုင်းနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုအရ Android 5.0 Lollipop ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ကောင်းကျိုးများကိုဆောင်ကြဉ်းပေးမည်။
[APK] မည်သည့် Android တွင်မဆို HTC ပြခန်းကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါ
ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဟာ HTC Gallery မှမည်သည့် Android ကိုမဆို Android တွင်တပ်ဆင်ခြင်းအတွက်အခြား Android မော်ဒယ်များတွင်ပါ ၀ င်သည့်အပြည့်အဝအသုံးဝင်သောပြခန်းပရိုဂရမ်တစ်ခုအားလက်ဖြင့်တပ်ဆင်ရန် apk ကိုထားရှိပါသည်။
Androidsis အမြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ပြုလုပ်ပြီးယခုအချိန်တွင်အနန္တတန်ခိုးရှင် Nexus6VS HTC Desire 816 ကိုရင်ဆိုင်နေရပါသည်။ မည်သူသည်စစ်ပွဲကိုအနိုင်ရသနည်း။
ယူရို ၃၀၀ အတွက်သာရည်ရွယ်သည့် HTC Desire 816 ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
ဤဆောင်းပါးအသစ်တွင် HTC Desire 816 ပြန်လည်သုံးသပ်မှု၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော Android terminal တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင့်အားငွေကြေးတန်ဖိုးနှင့်သင့်ကိုအံ့အားသင့်စေလိမ့်မည်။
HTC ၏ RE ကင်မရာကို ၀ ယ်ယူနိုင်ပါပြီ
ယနေ့တွင် HTC မှ RE ကင်မရာကိုသင့်အားစွန့်စားမှုများအားလုံးအတွက်သင့်နှင့်အတူလိုက်ပါမည့်မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ရှိကင်မရာကိုရောင်းချခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးတွင် HTC One Mini2ကိုစပိန်သို့မေလကုန်တွင်ပြသခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသို့တရားဝင်ဆင်းသက်ရန် ၆ လကျော်ကြာမြင့်သော terminal ကိုရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း HTC One M8 နှင့် M7 ကို Android 90 Lollipop သို့ update လုပ်သည်
HTC One မှ၎င်း၏ Twitter အကောင့်တွင်အတည်ပြုပြီးပါက HTC One M8 နှင့် M7 ကိုရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း Android 90 Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်လိမ့်မည်
HTC One M8 နှင့် HTC Desire EYE
ယနေ့တွင်သင့်အား HTC One M8 နှင့်လက်ရှိထိုင်ဝမ်ထုတ်လုပ်သူ HTC Desire EYE တို့အကြားနှိုင်းယှဉ်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပေးသည်။
HTC Desire EYE ကိုယမန်နေ့က New York City မှပွဲတစ်ခုတွင်ပြသခဲ့သည်။ ပြီးပြည့်စုံသော selfie ဖုန်း
HTC သည် HTC Desire Eye နှင့် HTC One M8 Eye တို့ကိုမိတ်ဆက်တော့မည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏ခန့်မှန်းစျေးနှုန်းများကိုငါတို့သိပြီးဖြစ်သည်
HTC Desire Eye ၏ပုံရိပ်အသစ်များက၎င်း၏ 13 megapixel ရှေ့ကင်မရာကိုအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်
ယနေ့တွင်သင့်အား 820-bit processor နှင့်ထိုင်ဝမ်မှထုတ်လုပ်သည့် HTC Desire 64 စမတ်ဖုန်းအသစ်ကိုဆန်းစစ်လေ့လာထားသည်
ဥရောပတွင် HTC One M7 ကို Android 4.4.3 ရရှိသည်
သင့်တွင် HTC One M7 ရှိပါက Android 4.4.3 ရှိလုံခြုံရေးတိုးတက်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့်အတူ၎င်းကို Android 4.4.4 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အဆင်သင့်ရှိနေပြီးဖြစ်သည်။
အလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်စမ်းသပ်မှု - HTC One M8
အသံသွင်းစတူဒီယိုတစ်ခုတွင် HTC One M8၊ လိမ်ဖဲ့ခြင်း၊ အမဲသတ်သောဓါးနှင့်တူကိုအတူတကွထားမည်ဆိုလျှင်ကော။ ပူးတွဲဗီဒီယိုထဲမှာအဖြေ။
နက် ၀ ပ်ကွန်ယက်သော့ဖွင့်ရန်လိုအပ်သည့် S-OFF ဖြစ်စဉ်အပြင် HTC One M8 ကိုမည်သို့အခမဲ့သော့ဖွင့်ရမည်နည်းကိုဆက်လက်ရှင်းပြသည်။
ဖြန့်ချိမည့် One M8 ၏မျိုးကွဲနှစ်ခု၊ တစ်ခုမှာရေခုခံမှုနှင့်အခြားတစ်ခုမှာပလပ်စတစ်အဖုံးဖြင့်ဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရလဒ်များကိုရရှိနိုင်ရန်မြန်ဆန်စွာစမ်းသပ်မှုပြုသည့် Samsung Galaxy S5 VS HTC One M8 ကိုဗွီဒီယိုတွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
HTC One M8 ရှိကင်မရာသည်မည်သည့်စွမ်းရည်ကိုသုံးနိုင်သနည်း။ အဖြေရဲ့အောက်မှာ
ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအချက်က IMGUR အသုံးပြုသူရိုက်ကူးထားသော HTC One M8 ကင်မရာ၏အရည်အသွေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး ထုပ်ကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။
HTC One M8 နှင့် M7 အသစ်တွင် root လုပ်နည်း
Root ကို HTC One M8 နှင့် M7 အသစ်တွင်အလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့်မည်သို့ရနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်ရှင်းပြခဲ့သည်။
HTC သည် HTC One M8 အသစ်ကိုအင်္ဂါရပ်များနှင့်တကယ့်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိသောဒီဇိုင်းဖြင့်ပြသခဲ့သည်။
HTC One M8 အသစ်ကို Snapdragon 801 ချစ်ပ်၊ ၅ လက်မဖန်သားပြင်၊ ကင်မရာနှစ်လုံးနှင့်သတ္တုကိုယ်ထည်ဖြင့်လွန်ခဲ့သောတစ်ချိန်ကတင်ပြခဲ့သည်။
မည်သည့် Android တွင်မဆိုတပ်ဆင်ရန် HTC terminal မ်ား၏မူလ application ဖြစ်သော HTC Music cover ကို XDA ဖိုရမ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
HTC M8 တွင်စမတ်ကျသည့်အမှုလည်းရှိမည်
evleaks သည် HTC M8 အသစ်အတွက်ရရှိနိုင်သည့်စမတ်အဖုံးများ၏ကတ်တလောက်ကိုသာစစ်ထုတ်ခဲ့သည်။
တရားဝင် HTC မွမ်းမံမှုများထပ်မံရရှိမည်မဟုတ်
၂၀၁၂ ခုနှစ်တိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီ၏ HTC One X ၏တရားဝင် Android update များကိုလက်ခံတော့မည်မဟုတ်ပါ။
Android 4.4 KitKat သည် HTC HD4 ကဲ့သို့သော ၄ နှစ်အရွယ်စမတ်ဖုန်းတွင်အလုပ်လုပ်သည်
Android 4.4 KitKat သည် ၄ ​​နှစ်သက်တမ်းရှိသော HTC HD4 ကဲ့သို့သော terminal တွင်အလုပ်လုပ်နေသောကြောင့် Android တွင်ဂူဂဲလ်မှလုပ်ဆောင်ခဲ့သောအသီးအပွင့်များဖြစ်သည်။
ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီ၏မန်နေဂျာများနှင့်ဒါရိုက်တာများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ထွက်ခွာသွားမှုသည် HTC One X ကဲ့သို့သောကြီးမားသောဆိပ်ကမ်းတစ်ခုနှင့်ပင်တောင်မှအနက်ရောင်အနာဂတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဖုန်းများဖြုတ်တပ်ရေးကိုအထူးပြုထားသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်သော iFixit က HTC One အသစ်ကိုဖွင့်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးရလဒ်မှာပိုမိုဆိုးရွားမဖြစ်နိုင်ပါ။ ၎င်းကိုဖယ်ထုတ်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်
MWC ၂၀၁၃၊ HTC One ၏ဗီဒီယို
MWC 2013 မှ HTC satand တွင်ထိုင်ဝမ်အိမ်မှ HTC One မှနောက်ဆုံးပေါ်အထင်ကရ terminal ကိုစမ်းသပ်နိုင်ခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီသည် HTC One ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ စျေးနှုန်းအတွက်မူ Google Nexus4နှင့်တိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်။
ထိုင်ဝမ်မှထုတ်လုပ်သူ HTC သည်စမတ်ဖုန်းကိုထိန်းချုပ်ရန်သေးငယ်သောကိရိယာများကိုလွှတ်တင်သည်။ စီမံကိန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရှိမော်ဒယ်များမှစတင်သည်
ဤစာရင်းသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွက် HTC မိုဘိုင်းဖုန်းများ၊ မော်ဒယ်အသစ်များနှင့်ယခုနှစ်တွင်စတင်မည်ဟုလူသိများသောအချို့တို့နှင့်ပေါက်ကြားခဲ့သည်
HTC Desire S တွင်ချက်ပြုတ်ထားသော Rom များကိုထည့်သွင်းပြီး Android 4.1.1 Jelly Bean သို့မွမ်းမံရန်ရိုးရှင်းသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ
HTC ထုတ်ကုန်များအတွက် GoldCard ကိုဖန်တီးရန် Fosco de HTCmania ၏ရိုးရှင်းသောသင်ကြားမှုဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှု။
Jelly Bean ကို HTC One ဖုန်းများအတွက်ကြေညာခဲ့သည်
Android 4.1 Jelly Bean ကို HTC One စီးရီးအမျိုးမျိုးတွင်ထုတ်လုပ်ရန်ပြင်ဆင်နေကြောင်း HTC ကအတည်ပြုခဲ့သည်။
များစွာသော HTC ဆိပ်ကမ်းများ၏ bootloader ကိုသော့ဖွင့်နိုင်သည့် HTCdev ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုလက်တွေ့လမ်းညွှန်။
နောက်ဆုံးပေါ် Android ဗားရှင်းကို HTC Desire တွင်ပျော်မွေ့ပါ၊ လူကြိုက်အများဆုံးထိုင်ဝမ်စမတ်ဖုန်း၏အလားအလာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်နည်းလမ်းတစ်ခု
HTCdev သည်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မှတ်ပုံတင်ပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့သည် bootloader ကိုသော့ဖွင့်ရန်လိုအပ်သောကိရိယာများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။
၄.၃ မျက်နှာပြင်နှင့်အလွန်ပါးလွှာသော HTC One S ၏စျေးသက်သက်သာသာဖြစ်သော HTC Ville C ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်။
HTC သည်၎င်း၏ Android ထုတ်ကုန်အားလုံးတွင် LogMeIn Rescue ပါ ၀ င်မည်
HTC သည်၎င်းကို Android ထုတ်ကုန်အားလုံးတွင် LogMein ပါ ၀ င်နိုင်သည်၊ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအရ HTC သည်ထိုအပလီကေးရှင်းနှင့်ပြelyနာများကိုအဝေးမှရှာဖွေချင်သည်။
Wildfire၊ Wildfire S နှင့် Desire အတွက် HTC သည် bootloader ကိုသော့ဖွင့်သည်။
HTC သည်ကျော်ကြားသော bootloader သော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်ကိုက်ညီသောမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများစာရင်းကိုတစ်ဖန်ပြန်လည်စစ်ဆေးသည်။ ယခု HTC Wildfire, Wildfire S နှင့် Desire တို့သည် root access ရရှိနိုင်သည်။
ယခုသင်သည် HTC Sensation ကိုသော့ဖွင့်နိုင်သည်
HTC သည်သုံးစွဲသူများနှင့်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအချက်အလက်များရှိပြီးသူတို့၏စက်ပစ္စည်းအားလုံး၏ bootloader ကိုသော့ဖွင့်ရန်ကူညီသည်။
HTC terminal ၏ပြန်လည်သုံးသပ်မှု၏တတိယနှင့်နောက်ဆုံးအပိုင်း။ ကျနော်တို့ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်တစ် ဦး အကဲဖြတ်ဘယ်မှာပထမ ဦး ဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပြီးနောက် ...
HTC ChaChaCha ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၏ဒုတိယအပိုင်း
HTC Sensation V LG LG Optimus
LG Optimus 2x နှင့် HTC Sensation နှိုင်းယှဉ်မှု
HTC Sensation ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏တတိယအပိုင်း
HTC Wildfire S စမ်းသပ်မှု၏တတိယအပိုင်း
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ဒုတိယအပိုင်း HTC Desire S
HTC Desire S ကိုစစ်ဆေးခြင်း \_ t
HTC အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သော HTC တံဆိပ်ဖြစ်သော HTC ...
HTC Incredible S. ၏သုံးသပ်ချက်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကို ဦး စွာစမ်းသပ်ခဲ့သည်။
HTC Incredible S terminal စမ်းသပ်မှု
တစ်ချက်နှိပ်ပြီး HTC Thunderbolt ကို root လုပ်ပါ
သင်၏ HTC Desire ကိုအခမဲ့သော့ဖွင့်ပါ။
သင်၏ HTC Desire ကိုသင့်ကွန်ပျူတာနှင့် USB ဖြင့်အခမဲ့ရယူပါ
ရှေ့ကင်မရာပါ ၀ င်သည့် Desire HD Htc Thunderbolt ကိုတင်ပြခဲ့သည်
နောက်ဆုံးပေါ် Htc Thunderbolt ကိုတင်ပြခဲ့ပြီး၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့မသိသေးသောနည်းပညာအသစ်များပါဝင်သည်။ အခြေခံအားဖြင့်တော့ရှေ့ကင်မရာပါ ၀ င်သည့် Desire HD ဖြစ်သည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကီးဘုတ်ပါ ၀ င်သည့် Android ဖုန်းသစ် Htc Evo Shift 4G ကိုတင်ထားသည်
Sprint သည်၎င်း၏ Android 4G terminal အသစ်ဖြစ်သော Htc Evo Shift ကိုတင်ပြခဲ့ပြီး၎င်းသည်လျှောနေသော qwerty keyboard ပါဝင်သည်။
Froyo ကိုအဆင့်မြှင့်ပြီးနောက် Htc Legend တွင် root ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် Rom ထည့်သွင်းလိုပါသလား။ ဒီမှာမင်းမှာအဖြေရှိတယ်
Htc Sync သည် Outlook နှင့် Android terminal တို့ကိုထပ်တူပြုရန်ခွင့်ပြုထားပြီးယခုတွင်သည်အခြား terminal များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်
ယခု HTC Htc Sync က Outlook ကို ထပ်မံ၍ Android terminals နှင့်ထပ်တူပြုရန်ခွင့်ပြုသည်
Htc Desire ကို click တစ်ချက်တည်းဖြင့် root access ရယူပါ
unrevoked ဟုခေါ်သော application တစ်ခုသည် Htc Desire ကို click တစ်ချက်တည်းဖြင့် root access ရယူရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဤတွင်သင့်တွင် hardware နှင့် External Legend နှစ်ခုစလုံးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ရက်အနည်းငယ်သာအသုံးပြုခဲ့သော terminal တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် Htc Incredible အတွက်လမ်းညွှန်အပြည့်အစုံရှိပြီး၎င်းနှင့်အတူ terminal ၏တရားဝင်သတ်မှတ်ချက်များအားလုံးရှိသည်။
HTC Desire သည် HTC Sense ဖြင့်မပါဘဲဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်
Htc Desire တွင် Htc Sense မျက်နှာပြင်ကိုရပ်ဆိုင်းပြီး Android အားဖြင့်ပါလာသည့်အရာကိုထားခဲ့ပါ။
Android 1.6 ကို HTC G1 တွင်အမြစ်မပါဘဲတရားဝင်ရုံးခန်းဖွင့်ပါ
Android 1.6 သို့မဟုတ် Donut ၏တရားဝင် version ကိုယခု Htc G1 terminal များအတွက်ရရှိပြီဖြစ်ပြီး root မလိုဘဲတပ်ဆင်နိုင်သည်။
ဒီနေ့ဟာ Htc Magic ရဲ့အလှည့်ပါ။ ကျနော်တို့ Donut သို့မဟုတ် Android 1.6 ကို Htc Magic မှာထည့်သွင်းတော့မှာပါ
ယခု Android စနစ်ကို Kaiser, Touch and Touch Cruise ကဲ့သို့သော HTC ဟောင်းမော်ဒယ်လ်များတွင်တပ်ဆင်နိုင်ပြီ။ ၎င်းတို့သည် HTC Touchd HD မော်ဒယ်များနှင့် Sony Xperia X1 တွင်အလုပ်လုပ်နေကြသည်။